Ogaden News Agency (ONA) – Ururka OYSU Greater Manchester oo Kulan Isugu Yimid Magalada Manchester
Ururka OYSU Greater Manchester oo Kulan Isugu Yimid Magalada Manchester
Posted by ONA Admin	/ January 23, 2012
Ururka dhalinta OYSU Greater Manchester ayaa shir isugu yimid magaalada Mancheste. Shirkan ayaa waxa kasoo qeybgalay Maamulka Jaaliyada machester iyo Ururka haweenka ee Manchester.
Ujeedada shirkan ayaa ah mid lagusoo bandhigayay qorshayaasha Action Planka OYSU ee Sanadka 2012. Waxaa shirkan lasoo bandhigay qorshaha ururka OYSU ee sanadkan 2012 oo dhowaan lagusoo saaray shirkii dhalinyarada ee ku qabsoomay wadanka Germany. Waxaana dhalintu ay qiimeyn ku sameyeen sidii loo meel marin lahaa qorshayashaas.
Masuliyiinta Jaaliyada Manchester ayaa ururka dhalinta ku ammaanay sida wanaagsan ee ururku uga howlgalo Gobolka manchester, waxayna dhalinta siiyeen guubaabo iyo taloyin ku aadan ururnimada.
Sidoo kale maamulka Haweenka ayaa dhalinta u balan qaaday inay kugarab istaagi doonaan shaqoyinka ay ururku qabanayaan sanadkan 2012, waxayna halkaas dhalinta kusiiyiin dhiiri galin.
shirka ayaa sidoo kale waxa lagaga hadlay oo lasoo bandhigay warbixino la xidhiidha dhacdooyinki ugu danbeyay ee dhulka Somalida Ogadeniya ka dhacay. Sida Dilal iyo xadgudubyo ay ciidamada Ethiopia ka geysteen dhulka Ogadeniya bishaan. Waxaa kale oo shirkan lagaga hadlay xog waran ku aadan qaxotiyada Somalida Ogadeniya ee kusugan Geeska Afrika.
Jaaliyada Greater Manchester ayaa waxa dhowaan kusoo biiray qoysas badan oo dhowaan laga soo qaaday xeryaha Qaxootiga ee Geeska Afrika waxa ayna aad ula socdaan marxaladaha ay kusugan yihiin dadka ree ogadeniya ee kusugan xeryaha qaxotiga Kenya.
Shirkan ayaa waxa Ururka OYSU uu soo saarey go’amo uu ku canbaareynayo Ciidamada gumeysiga Ethiopia. Waxayna caalamka ugu baaqayaan gaar ahaan dowlada UK inay sida ugu dhaqso badan ay xidhiidho ulasameyso Dowlada Ethiopia islamar ahaantaasna baadhitaano lagu sameyo xadgudubyada ka dhanka ah Bani aadamka ee Taliska TPLF ka geystaan dhulka Somalida ogadeniya.